Maalin: Janaayo 20, 2020
Rugta injineerinka cilmiga cilmiga dhulka oo ku xiran Ururka Shaqaalaha ee Injineeriyada Turkiga iyo Architects (TMMOB), Rugta Injineeriyada cilmiga dhulka, oo warbixin ka diyaarisay Ankara - İzmir Train Speed ​​Speed, oo la qorsheeyay in la furo 2022, waxay ku taalaa qaybta Eskişehir qeybta. [More ...]
Dhaqanka Center '2019 Year of Jidka qaaday by xusay in shirka Review Ra'iisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan Bestepe National Congress oo siiyey warbixin ku saabsan maalgelinta tareenka gaadiidka Turkiga. '' 2019 dhamaan wadooyinkayaga tareenka [More ...]
Dabaaldegyada ayaa sii wadaya in lagu abaabulo magaalada Ordu si loo wanaajiyo isboortiga jiilaalka iyo dalxiiska jiilaalka. Macnaha guud, 5ta Mesudiye ee Keyfalan-Ulugöl Plateau ee degmada Mesudiye iyadoo lala kaashanayo Dawladda Hoose ee Ordu, Dawladda Hoose ee Mesudiye iyo Maamulka Degmadda Mesudiye. [More ...]
Sababta oo ah bilowga nasashada Semistarka, waxaa jira maalmo firfircoon AŞTİ. AŞTİ, oo ay tirada ardayda ku badatay, Dawladda Hoose ee Magaala Weyn waxay kordhisay tallaabooyinka amniga. KHUDBADDADA ARDAYGA Fasaxyada ciidaha iskuulada AŞTİ, oo ay maamusho BUGSAŞ oo ku xiran Dowlada Hoose ee Ankara. [More ...]
Iyada oo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha iyo TÜBİTAK, shaqadu waxay ku sii soconayaan iyada oo qandho ay ka jirto Xarunta Goobaha iyo Duulista Hawada (GUHEM), oo la qorsheeyay in la furo Abriil 23. [More ...]
Thanks to Modric Dhaqaalaha iyo Awoodaha Farsamaynta Gawaarida, İzmir Metro waxay badbaadisay 10 milyan oo lira oo koronto ah 6 sano gudahood. Izmir isticmaalka tamar ahaan aadka u dhaqaale ee tamarta, mid ka mid ah waxyaabaha qiimaha ugu muhiimsan ee nidaamyada tareenka [More ...]
Jawaab aan qancin karin muwaadiniintu waxay ka timid Wasaaradda Gaadiidka xaaladda ku saabsan garoonka diyaaradaha iyo mashruucyada tareenka ee ay dadka reer Çorum sugayaan iyagoo rajaynaya oo doonaya inuu wax barto. Wasaaradda gaadiidka ayaa ka hadashay sameynta garoonka diyaaradaha ee magaalada inorum. [More ...]
Turkey ayaa riyo 60-sano oo magaalada gudaha gaari oo ka dhici doona Bursa, ayaa ku daray mid ka mid ah oo cusub si ay shaqo technology-oriented sare. Bursa Uludağ Machadka Sayniska Farsamada ee Jaamacadda Brisa Proffisation. Dr. Mehmet Karahan, Bursa [More ...]
Nidaamka qiimeynta guryaha ee tikniyoolajiyadda ku saleysan ee tikniyoolajiyadda Endeksa.com ayaa baaray qiimaha iibka iyo xilliyada lagu wareego guryaha ku yaal Linemraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Line. Marka loo eego xogta Endeksa, deggenaanshaha ugu qaalisan oo leh celcelis ahaan iibka 1.038.520 TL ayaa ku yaal Göztepe. [More ...]